Fanoherana… famorehana | NewsMada
Mby aiza ny fiovana sy fanovana ny fomba fanaovana politika? Saika ny afitsoky ny hoe mpanohitra manoloana ny ataon’ny mpitondra hatrany no anombanana sy hitsaran’ny maro izany. Raha ny mpitondra, manana sy mampiasa ny fahefam-panjakana amin’ny fanatanterahana izay nampanantenainy tamin’ny fampielezan-kevitra nifidianan’ny vahoaka azy… hampindramana fahefana.
Takina aminy ny tamberin’andraikitra amin’ny hoe fitondrana tsara tantana, tany tan-dalàna, mangarahara, ahazoana maneho hevitra… Mby aiza? Mitsara ny vahoaka raha misitraka fampandrosoana amin’ny fiainany andavanandro: ny fandriampahalemana, ohatra, ny fitsaboana, ny fampianarana, ny famoronana asa… Efa misy fiovana sy fanovana ho amin’ny tsaratsara kokoa no ho ny teo aloha?
Raha misy tsy fahavitana sy tsy fahombiazana, eo no ilana ny mpanohitra hatrany ifotony: hanaitra, hanitsy, hanoro hevitra; hanao fanamby fa mahavita tsara sy be lavitra raha mahazo fitondrana ka tsara fidina amin’ny manaraka. Saingy tonga hatrany ifotony ho amin’ny tena fitsinjovana ny fiainam-bahoaka amin’ny fanaraha-maso ny fanatanterahana mpitondra, izay nampanantenainy ve ny mpanohitra?
Izay no anisan’ny mahatonga ny vahoaka ifotony leo na tsy matoky mpanao politika, indrindra ny hoe mpanohitra: tsy mahalala afa-tsy fahefam-panjakana? Nefa mila manana foto-kevitra sy fandaharanasa ary paikady ho amin’izany hisian’ny fampandrosoana amin’ny fanoherana miainga any ifotony. Sarotra izany? Tsy hisy hanao… Tsy sahy mijoro sy tsy miatrika fifidianana any ifotony?
Any amin’ny firenen-dehibe, isaky ny kaominina na minisitera, ohatra, ny fanoherana amin’ny fanaraha-maso sy tolo-kevitra raha ilaina: mitohy ho azy ny raharaha rehefa mahazo fitondrana. Hafa be amin’ny ny hoe fitakiana fiaraha-mitantana, fametraham-pialana, fanakorontanana… Mitondra inona eo amin’ny fiainam-bahoaka any ifotony? Na karazana fitaka sy famorehana ny fanoherana…